Archive du 20171208
Famosaviana ny Malagasy Vary simba 2310 gony tratra tany Toamasina
Famosaviana tsotra izao ! Vary nohafarana avy any Pakistan an’arivony gony no tratra tany Toamasina omaly. Vary lo izy ireo. Teratany Pakistaney no fantatra fa tompony. Tsy mitsahatra midina ifotony noho ny baikon’ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana taorian’ny fandalovany tany Toamasina ireo ekipan’ny “task force” Toamasina, izay ahitana ny talem-paritry ny varotra sy ny talem-paritry ny fitaterana ary ny komandin’ny vondrom-pileovan’ny zandary Atsinanana.
Fisotroan-dronon’ny depiote Lany teny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna
Fifanarahana iraisam-pirenena miisa 4, volavolan-dalana 2, ary tolo-dalàna 1 no nolaniana teo anivon’ny Antenimierampirenena Tsimbazaza omaly 7 desambra 2017 maraina notarihan’ny filoha lefitra Razafimanantsoa Hanitra, izay notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra.
Hetsiky ny FTAR Efa fitakiana bontolo sisa
Na teo aza ny diabe nataon’ny fikambanan’ireo mpitondra fiarakaretsaka eto an-drenivohitra (FTAR) omaly, izay nanao diabe avy eo Ankazomanga ka hatrany Anosy ary nanatonan’izy ireo tompon’andraiki-panjakana toy ny ao amin’ny minisiteran’ny fitaterana sy ny filohan’ny antenimierandoholona Rivo Rakotovao mihitsy dia nanambara ny avy eo anivon’ny fisahanana ara-teknika ny fitaterana eto Antananarivo fa tsy hihemotra amin’ny fanatsarana tokony hatao
Lalàm-pifidianana feno kajy politika Mampitandrina ny governemanta ny TIM
Mikononkonona zavatra hafahafa ny fitondram-panjakana matoa ela fikenona amin’ny fandrafetana ny lalàm-pifidianana tahaka an’io. Izay no tenin’i Rolland Ravatomanga avy ao amin’ny TIM izay nandray anjara mavitrika tamin’ilay fifanakalozan-kevitra momba ny soatoavina sy ny ady amin’ny kolikoly eo amin’ny tontolo politika nokarakarain’ny PNUD sy ny FES teny amin’ny hotel Colbert.
Miarahaba Jean a ! Reko fa hoe tonga mba mandalo kely eto an-tanàna ianao, rehefa avy any amin’ny Amperora dia hiova akanjo sy kiraro kely fotsiny dia efa hanainga indray.
Fanodinkodinam-bola tao amin’ny Madaomby Mpivady voasambotra niaraka tamin’ny 90 tapitrisa Ar
Mpivady samy mpiasa ao amina orinasa Madaomby no voasambotry ny Zandarimariam-pirenena omaly alakamisy 7 desambra 2017 tamin'ny 4 ora sy sasany hariva teny Sabotsy Namehana.
Fiakaran’ny rano Tsy mbola misy atahorana, hoy ny APIPA
Tsy mbola misy atahorana ny fiakaran’ny rano eto an-drenivohitra, raha araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny APIPA Rateloson Philippe, omaly. Mbola vao 0,05 metatra mantsy ny refin’ny rano etsy Ikopa mandalo eny Anosizato raha 3 metatra vao tena atahorana.
Norombahan’ilay Portugais Cristiano Ronaldo fanindiminy ny baolina volamena satria izy no voahosotra ho « ballon d’or 2017 » halina. Ny taona 2008, 2013, 2014 ary 2016 no efa nandrombaka ny fandresena i CR 7.
CANAL PLUS Madagascar Manome fihenam-bidy mandritra ny volana desambra
Tapa-bolana eo ho eo sisa dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona isika. Hamalifaly ny mpanjifa rehetra amin’izany ny Canal Plus ka misy ny tolotra manokana omen’izy ireo nanomboka omaly Alakamisy 07 desambra ka hatramin’ny 24 desambra ho avy izao.